आमालाई सम्झन दिन वा दिवस कीन कुरुँ ?
जनता भ्वाइस calendar_today ११ बैशाख २०७७, 7:17 am
हामीहरु विभिन्न चाडपर्वहरु मनाउँछौँ, दिवसहरु मनाउँछौँ । सम्झनकै लागि आउने दिनहरु पनि लोकप्रीय नै छन् । प्रत्येक वर्ष वैशाखकृष्ण पक्ष औँसीका दिन मनाइने मातातिर्थ औँसी अर्थात् आमाको मुख हेर्ने पर्व । यो वर्ष पनि आयो थोरै खुसी, धेरै वाध्यता लिएर । आजको दिन जन्मदाता आमालाई सम्मान गर्ने दिन भनिन्छ । शास्त्रमा उपाध्याय (पण्डितं), आचार्य र पिताभन्दा पनि ठूली मानिएकी आमाप्रति श्रद्धा, भक्ति, सम्मान र आदर गर्ने तथा उनबाट शुभाशीर्वाद थाप्ने दिनका रूपमा यो पर्वलाई लिइन्छ । आज बिहानै छोराछोरीले नुहाएर आफ्नी आमालाई राम्रा–राम्रा लुगा लगाइदिने र मीठा–मीठा खानेकुरा खान दिई आशीर्वाद थाप्ने प्रचलन छ । तर, यो कस्तो प्रचलन होे, नौ महिना गर्भमा राखेर अनेकौँ दुख र हन्डर सहेर यो धर्ति देखाउने, संसारमा सबैभन्दा धेरै माया गर्ने आमाको मुख हेर्न वा सम्झन दिन नै कुर्नुपर्ने ? कहिलेकाँही अचम्म लाग्छ, की यि र यस्ता दिवसहरु छन्, दिनहरु छन् जस्लाई हामी विशेष मान्दै आएका छौँ ।
आमा भन्दा ठुलो कुनै भगवान् पनि नलागोस् । हर दुखहरुमा आमा भन्दै रुन सकियोस् । आमा हुने हरुका लागि आँखामा आमा, मनमा आमा, तनमा आमा, हर सुखदुखमा आमा, सफलता असफलतामा आमा ।
जसले गर्भमा भएको शिशुलाई नदेखि–नदेखि पनि आघात प्रेम गरिन्, उनैलाई हेर्न पनि दिन नै आउनपर्ने । सानै हुँदा तेस्तै ३÷४ कक्षामा पढ्थेँ होला । स्कुलको वार्षिक उत्सव तथा अभिभावक भेलामा हाम्रो स्कलको प्रांगणमा पनि हामी धेरै जनाको आमाहरुको भेला थियो । समिक्षा भोली पल्ट मात्र भयो तेरो आमा यस्तो, मेरो आमा यस्तो । तेरी आमा काली, मेरी आमा गोरी आदि इत्यादि । त्यस बेला सबैलाई आफ्नै आमा मन परेको थियो । मलाई पनि मेरै आमा मन परेकी थिइन्, आमा मलाई तिमि नै मन परेकी थियौ साथीहरुले तेरो आमा यस्ती उस्ती भन्दा मन दुखेका थियो । ती पुराना यादहरुले मन झस्काइरहन्छ मलाई पलपल । यो वर्ष बैशाख ११ गते मातातिर्थ औशी पर्यो । आज विहान सबेरैबाट अघिल्ला वर्षहरुमा झैँ, फेसबुकको भित्ताहरु रङ्गिए, लेखेर मिस यु आमा, लभ यू आमा आदि इत्यादि । खैर फेसबुकका भित्ताहरु पनि वर्षमा एक दिन रङ्गिन पाउँछ, जसले संसार रङ्गाइदिइन् । मलाई पनि हिजो साँझ देखि नै हो, तेस्ता मिठा सन्देशहरु आएकाः भोली ममीलाई फोन गर है, भोली घर जान्छौ कि जाँदैनौँ ? जानी भए कतिबेला जानी ?? बिहान पनि आए थुप्रै सजकता मिसिएका सन्देशहरु भनिएको थियो अनि ममीसँग कुरा भयो, फोन गरेउ की गरेनउ ? के भन्नुभयो त ममीले ??
सम्झन्छु भनेर तिमिलाई सम्झिन नपरोस्, हरदम तिमि सम्झनामा हुनु ।” आखिर जे सुकै भएपनि संसारको जुनसुकै आमालाई गर्ने मायामा कहिँ–कतै कसैबाट कमी नहोस् ।
यि सबैको एउटै उत्तर दिन मन छ की, म दिन वा दिवस कुरेर ममीसँग बोल्ने वा भेट्ने गर्दिनँ, भनेर । मलाई यति मात्रै लाग्छ की, जस्ले आफुलाई चुडाएर जीवन दिइन्, जस्ले संसारको सबैभन्दा धेरै प्रेम गर्छिन्, जस्ले सबैभन्दा अघि दुख महसुस गर्छिन्, अनि उनैलाई सम्झिन दिन वा दिवस कुर्न नपरोस् । मातातिर्थ औँसीकै दिन मैले मेरी आमालाई नभेटेको धेरै भयो । केहि पेशागत, केही भौगोलिकता लगाएतका कारणहरु विविध छन् । तर, मन अलिकति पनि विचलित् हुँदैन किनकी दिन वा दिवस हेरेर मात्रै आमालाई सम्झिन पर्छ वा भेट्न पर्छ भन्ने पटक्कै लाग्दैन मलाई । “मेरी प्रिय आमा, तिमिले त मलाई नै लेख्यौ तिम्रो बारे म के लेखौँ ? यति मात्रै चाहन्छु म तिमिलाई सम्झिनका लागि कुनै दिन, बार, तिथि मिति आउनु नपरोस् । सम्झन्छु भनेर तिमिलाई सम्झिन नपरोस्, हरदम तिमि सम्झनामा हुनु ।” आखिर जे सुकै भएपनि संसारको जुनसुकै आमालाई गर्ने मायामा कहिँ–कतै कसैबाट कमी नहोस् ।
यो कस्तो प्रचलन होे, नौ महिना गर्भमा राखेर अनेकौँ दुख र हन्डर सहेर यो धर्ति देखाउने, संसारमा सबैभन्दा धेरै माया गर्ने आमाको मुख हेर्न वा सम्झन दिन नै कुर्नुपर्ने ? कहिलेकाँही अचम्म लाग्छ, की यि र यस्ता दिवसहरु छन्, दिनहरु छन् जस्लाई हामी विशेष मान्दै आएका छौँ ।
आमालाई बदलामा सुख दिन नसकिएला तर, दुख कहिल्यै दिन नपरोस् । आमालाई हेर्न, आमालाई सम्झिन वा आमालाई माया गर्न दिन वा दिवस कुर्न नपरोस् । आमाहरु बस्नका लागि वृद्धाआश्रमहरु नबनुन्, आफ्नो पेटमा पालेर जन्माएकी आमा पाल्ने हैसियत हर सन्तानमा होस् । सन्तानका हर दुखमा दुख्न सक्ने आमाको दुखमा रमाउने दिन कहिल्यै नआओस् । आमालाई सम्झनकै लागि कुनै दिन, वार, तिथि वा मिती कुर्न कहिल्यै कुनै सन्तानलाई नपरोस् । आमाको पवित्र मायालाई कसैको मायासँग तुलना गर्न नपरोस् । संसारका हर कोही आमाले भोको बस्नु नपरोस्, संसारका हर कोही आमाले नाङ्गिनु नपरोस् । आमा भन्दा ठुलो कुनै भगवान् पनि नलागोस् । हर दुखहरुमा आमा भन्दै रुन सकियोस् । आमा हुने हरुका लागि आँखामा आमा, मनमा आमा, तनमा आमा, हर सुखदुखमा आमा, सफलता असफलतामा आमा । आमा नहुनेहरुका लागि मात्र सम्झनामा आमा, चाहनामा आमा । आमा भन्नका लागि आमा, आमा बन्नका लागि पनि आमा, यो संसार सिर्जित हुनका लागि आमा । जय आमा, जय जननी !